Huawei Nova3စမတ်ဖုန်းရဲ့အနေအထားကဘယ်လိုလဲ ? | Myanmar Mobile App
Home Review/Unboxing Huawei Nova3စမတ်ဖုန်းရဲ့အနေအထားကဘယ်လိုလဲ ?
Huawei ရဲ့အသစ်ထွက် Nova3ဖုန်းကိုတော်တော်လေးကြိုက်မိတယ်။ ကြိုက်မိတယ်ဆိုတာထက် အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောရင် ပိုမှန်မှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ?
ပထမဆုံးအံ့သြမိတာက Huawei ကသူ့ရဲ့၁၁ သိန်းတန် P20 Pro လို Flagship ဖုန်းမှာသုံးထားတဲ့ Kirin 970 လို အဆင့်မြင့် Processor ကို သူ့ရဲ့အသစ်ထွက် ငါးသိန်းကျော်တန် Nova3စမတ်ဖုန်းမှာ အသုံးပြုပေးလိုက်လို့ပါ။ RAM အနေနဲ့ 6GB ပါဝင်ပါတယ်။ Kirin 970 Processor ဟာ Overall performance အားဖြင့် Snapdragon 835/845 processor ကိုယှဉ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ Machine learning နဲ့ AI ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာတော့ Kirin 970 ဟာ အဆိုပါ Chipset တွေထက်အနည်းငယ်ပိုသာပါတယ်။ Processor အနေနဲ့ Huawei ရဲ့လက်ရှိအကောင်းဆုံး Processor ကိုထည့်သုံးပေးထားတဲ့အတွက် ဒီဖုန်းအနေနဲ့ဆိုရင် Performance ပိုင်းလုံးဝကောင်းမွန်မှုရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ကားဂိမ်းဖြစ်တဲ့ Asphalt9နဲ့ လက်ရှိလူဆော့အရမ်းများတဲ့ PUBG, Mobile Legend တို့ကိုဆော့ကြည့်တာ အထစ်အငေါ့မရှိ Smooth ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းကိုယ်ထည် quality ပိုင်းအနေနဲ့လည်း Premium ဆန်တဲ့ Quality မျိုးခံစားရပါတယ်။
P20/P20 Pro ရဲ့ကိုယ်ထည်အရည်အသွေးနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်အနေအထားထိရအောင်လုပ်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
နောက်ထပ်ကြိုက်နှစ်သက်မိတာက Nova3ဟာရှေ့ Selfie Camera ရော နောက် Primary Camera တွေမှာပါ AI Photography စနစ်ပါဝင်ပါတယ်။ Nova3စမတ်ဖုန်းမှာ ရှေ့ကင်မရာ ၂ လုံး ၊ နောက်ကင်မရာ ၂ လုံးပါဝင်ပါတယ်။
ရှေ့ Selfie Camera အနေနဲ့ 24MP sensor (f/2.0 aperture) နဲ့ 2MP sensor(f/2.4 ) lens တို့ကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ် ။ ရှေ့ Selfie lens ၂ လုံးထဲက 2MP sensor က Portrait mode/Bokeh effects တွေအတွက်သီးသန့်ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ နောက်ဘက်ခြမ်းကင်မရာအနေနဲ့ 16MP (f1.8 ) primary camera နဲ့ 24MP (f1.8 ) monochrome camera စတဲ့ Lens ၂ လုံးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။
ရှေ့ Selfie Camera တွေရော ၊ နောက်ဘက်ခြမ်း Camera တွေမှာပါ AI Photography ပါတဲ့အတွက် ကောင်းကင်လား ၊ ပင်လယ်လား ၊ အပင်တွေလား ၊ တိရစ္ဆာန်လား ၊ လူတွေလား ၊ လူမျက်နှာသွင်ပြင်လား မြင်ကွင်းပေါင်း အမျိုး ၂၀၀ ကျော်ကိုအလိုလျောက်ခွဲခြားသိရှိနိုင်ပြီး ၎င်းမြင်ကွင်း/အရာဝတ္တုတွေနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် Camera setting တွေကို auto ချိန်ညှိပေးကာ ကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်ပုံရလဒ်အရည်အသွေးကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ AI Photography mode ကို Default အနေနဲ့ On ထားပြီး AI Mode ဖွင့်ရိုက်ချိန်မှာတော့ ရရှိလာတဲ့ ဓာတ်ပုံရလဒ်ကကောင်းမွန်မှုရှိပါတယ်။ နောက်ဘက်ခြမ်းကင်မရာမှာဆိုရင် Main Camera ဖြစ်တဲ့ 16MP (f1.8 ) primary camera ရဲ့ဓာတ်ပုံရလဒ်ထက် 24MP (f1.8 ) monochrome camera ရဲ့ Black & white ဓာတ်ပုံရလဒ်ကိုပိုကြိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Video ရိုက်ကူးရာမှာ 4K resolution ထိရိုက်ကူးနိုင်သော်လည်း Stabilization feature တွေမပါဝင်တဲ့အတွက် Tripod သာတပ်မရိုက်ဘူးဆိုရင် ဗီဒီယိုထဲမှာ ရုပ်ထွက်သိပ်မငြိမ်ဘဲတုန်ခါမှုလေးတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Video Recording ပိုင်းမှာအားရကျေနပ်မှုမရှိပါ။ ခြုံပြောရရင် ကင်မရာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ သူ့ထက်မြင့်တဲ့ Huawei P20 နဲ့ P20 Pro ကိုမမှီပေမယ့် အလယ်အလတ်အဆင့်စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာတော့ ကင်မရာကောင်းမွန်မှုရှိတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ်တော့လက်ခံလို့ရပါတယ်။
Display ပိုင်းအနေနဲ့ Nova3စမတ်ဖုန်းမှာ 6.3-inch (2340×1080 resolution) IPS LCD Display ကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ LCD Display သုံးဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ရုပ်ထွက်အနေနဲ့ဆိုရင် တော်တော်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ AMOLED Display သုံးလိုက်ရင်တော့ ဒီထက်နည်းနည်းပိုပြီး Perfect ဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ့် ဈေးလည်းနည်းနည်းပိုကြီးသွားနိုင်ပါတယ်။
Security ပိုင်းအနေနဲ့ Fingerprint နဲ့ Face Unlock စနစ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက Nova3မှာပါတဲ့ Face Unlock စနစ်ဟာ ဈေးကွက်ထဲမှာလက်ရှိရောင်းချနေတဲ့ Android ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ Selfie Camera အသုံးပြုလုပ်ဆောင်တဲ့ Face Unlock စနစ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး ။
Nova3ရဲ့ Face Unlock စနစ်ဟာ iPhone X မှာကဲ့သို့ Infrared light sensor ကိုအသုံးပြုလုပ်ဆောင်တဲ့ Face Unlock feature ဖြစ်ပြီး ရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာပါဝင်တဲ့ IR sensor ရဲ့ Infrared light က Facial data တွေကိုအတိအကျမှတ်သားစစ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။ အခြား Android ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ သာမန် Selfie Camera ကိုအသုံးပြုလုပ်ဆောင်တဲ့ Face Unlock feature ထက် Nova3ရဲ့ IR based Face Unlock feature ကများစွာပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိပြီး လုံးဝမှောင်မဲနေတဲ့အမှောင်ထဲမှာလည်း Nova3ရဲ့ Face Unlock feature ကကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Mi 8/8 EE နဲ့ Oppo Find X မှာလည်း ဒီစနစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။
IR Sensor ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ Feature နောက်တစ်ခုကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ iPhone X မှာပါတဲ့ Animoji ပုံစံမျိုး AR lens ဆိုတဲ့ feature ကိုထည့်သွင်းပေးထားခြင်းပါ။ IR Sensor ကနေ ကိုယ့်မျက်နှာသွင်ပြင် data ကိုလှမ်းဖတ်ပြီး (ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံး ၊ မျက်ခုံး နဲ့ပါးစပ်လှုပ်ရှားပုံစတာတွေကို detect လုပ်ပြီး ) 3D အရုပ်လေးတွေအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးမှာပါ။
Battery အနေနဲ့ 3750 mAh battery ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး အမြန်အားသွင်းစနစ်အနေနဲ့ SuperCharge feature ပါဝင်ပါတယ်။ အမြန်အားသွင်းစနစ်ပါတယ်ဆိုသော်လည်း အားအပြည့်သွင်းကြည့်ရာ ၂ နာရီလောက်တော့ကြာပါတယ်။ ပထမ နာရီဝက်အတွင်းမှာ 25% အားဝင်ပါတယ်။ ၁ နာရီခန့်ကြာတော့ 55% ထိရောက်ပါတယ်။ အမြန်အားသွင်းစနစ်လို့ပြောလို့ရမယ်မထင်ပါ။ လက်ရှိစမ်းသုံးကြည့်ပြီးသလောက် Battery ပိုင်းမှာလည်းကောင်းမွန်မှုရှိပါတယ်။ တစ်နေကုန်အားရင်အားသလို Facebook သုံးလိုက် ၊ YouTube ကြည့်လိုက် ၊ ဂိမ်းဆော့လိုက်နဲ့သုံးနေတာတောင် ညပိုင်းမှာ Battery အနေနဲ့ 30% လောက်ကျန်ပါသေးတယ်။
Storage အနေနဲ့ 64GB/128GB စတဲ့ Storage ၂ မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး အားသာချက်အနေနဲ့ Micro SD card လည်းထပ်စိုက်လို့ရပါသေးတယ်။
ခြုံငုံသုံးသပ်ရရင် Nova3ဟာ အလယ်အဆင့်စမတ်ဖုန်းထဲမှာတော့ ပြီးပြည့်စုံမှုရှိတဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် ။ ဖုန်းရဲ့ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံကလည်း Premium Quality အနေအထားရှိပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ပြည်တွင်းပြိုင်ဘက် Xiaomi Mi 8,Mi 8 SE လိုဖုန်းတွေကိုအဓိကယှဉ်ပြိုင်ဖို့ထုတ်ထားတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ၅ သိန်းခွဲဝန်းကျင်ထဲမှာတော့ ဝယ်သင့်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးပါ ။ ၅ သိန်းဝန်းကျင်တန်ဂျင်းဖုန်းမဟုတ်တာတော့သေချာပါတယ်။
Previous articleiPhone XS နဲ့ iPhone XS Plus ရဲ့ ဓါတ်ပုံများ ထွက်ပေါ်လာ
Next articleLenovo က စွမ်းရည်မြင့် 2-in-1 Yoga C930 Laptop ကို ကြေညာ